जत्ति कमाए पनि पैसा बचाउन सक्नु भएन ? यसरी गर्नुहोस खर्चको कन्ट्रोल « Sajha Page
जत्ति कमाए पनि पैसा बचाउन सक्नु भएन ? यसरी गर्नुहोस खर्चको कन्ट्रोल
प्रकाशित मिति: February 8, 2019
काठमाडाैँ । नेपाल जस्तो अविकशित देशमा अधिकांश आर्थिक रुपमा कम्जोर परिवार नै रहेका छन । जस्तो तसो कोहि न कोहि वैदेशिक रोजगारमा गएको कारण साधारण गर्जो टरी चाहि रहेको छ। तर बढ्दो महंगीसंगै परिवार धान्न धेरै परिवारको लागी चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ ।
आम्दानी नबढ्ने तर वर्षेनी अत्यधिक महंगी बढ्नाले गर्दा जीवन निर्वाह गर्न जटिल बन्दै गैरहेको अवस्था छ । तर यो समस्या हाम्रो देशमा मात्र हैन हामि जस्तो अर्धविकशित देश मात्र नभएर कतिपय विकशित देशका परिवारमा पनि रहन्छ । पैसा कमाएर मात्र हुन्न त्यसको सहि सदुपयोग गरेन भने जत्ति पैसाले पनि पुग्दैन भन्ने भनाई पनि यहा महत्वोपूर्ण रहन्छ ।
आउनुहोस यहा खर्च कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिएला भन्ने विषयमा जानौ :
१. सबै भन्दा पहिले आफ्नो आम्दानीको स्रोत र खर्चको हिसाव किताव राख्ने गर्नुहोस, जसले आम्दानी र खर्चको मोटामोटी हिसाब स्पष्ट हुन्छ ।
२. पैसा छ भन्दैमा अनावश्यक खर्च नगर्नुहोस, पहिले सोचेर अत्यावश्यक कुराको लागि खर्च गर्नुहोस र बाकी रकम भए मात्र अन्त खर्च गर्ने बारे सोच्नुहोस ।
३. आफ्नो आम्दानिबाट थोरै भएपनि बचत गर्ने बानी बसाल्नुहोस । सबै पैसा सिध्याउने बानि नबसाल्नुहोस् । जसले गर्दा भविस्यमा भइपरी आउने कामको लागी उपयोगी हुन सक्छ ।
४. आफ्ना छोराछोरीको शिक्षादीक्षाको लागि योजना बनाउनुहोस् । आफ्नो आम्दानी अनुसारको स्कुल छनौट देखि आवश्यक सम्पूर्ण खर्चको आंकलन गरेर त्यसको हिसाब किताव पहिल्य नै निकाल्नुहोस । ताकी भविस्यमा गएर कुनै समस्या आइनपरोस ।
५. तिर्नु पर्ने ऋण सापटीहरु तिरी हाल्नुहोस । जसले गर्दा तपाईलाई ऋणको बोझ र मानसिक तनावबाट मुक्ति मिल्छ । त्यसै गरि कतैबाट लिनु छ भने पनि समय मै लिने बानी गर्नुहोस् ।
६. तपाईसंग मनग्गे पैसा भएपनि अनावश्यक रुपमा हच्वाको भरमा खर्च नगर्नुहोस । त्यसो गर्दा पैसा खर्च गर्ने बानी बस्छ र जत्ति पैसाले पनि अभाव महसुश गराउने छ । बरु बैंक तथा इन्सुरेन्समा बचत गर्ने बानी बसाल्नुहोस ।
७. जागिर खानु हुन्छ भने तलव समय मै दिने ठाउमा जागिर खादा राम्रो हुन्छ । ताकी तपाईको खर्च गर्ने समयमा तलव सुबिधा हात परोस । यदि व्यापार व्यवसाय गर्नु हुन्छ भने लेनदेनको हिसाब सहि र समयमा गर्ने बानी बसाल्नुहोस् । जसले गर्दा अनावश्यक झन्झट र आर्थिक हिनामिना हुनबाट जोगिन सकिन्छ ।